Arimaha Bulshada – Page 4 – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Cali Khaliif: Habar-Gidir iyo Daarood lama tartami karaan Xasan Sh ee ha quustaan (DAAWO)
December 29, 2016	Leave a comment 32 Views
Madaxweynaha Maamulka Khaatumo State Cali Khaliif Galeyr ayaa shaaca ka qaaday in beelaha Daarood aysan ku guuleysan doonin xilka madaxweynaha Soomaaliya. Isagoo ku sugan Buuhoodle ayuu Cali khaliif sheegay in kaliya beesha Abgaal oo kamid ah beelaha Hawiye ay ku guuleysan doonto madaxweynaha Soomaaliya gaar ahaan Xasan Sh Maxamuud. ” Xasan Sh lalama tartami karo, abgaal lalama tartami karo, nin ...
DEG DEG: Ciidamada AMISOM oo la qarxiyay iyo Meydadka Shacabka oo …
December 27, 2016	Leave a comment 31 Views
Wararka laga helayo Degmada Afgooye ee Gobolka Sh.Hoose ayaa sheegaya in Qarax xoogan lagu beegsaday kolonyo ay wateen Xoogaga Nabad Ilaalada ee Midowga Afrika ee AMISOM. Qaraxan oo ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso ayaa lagu dhuftay Gaadiidka Xoogaga AMISOM, waxaana uu Qaraxa ka dhacay Degaanka Lamabar 60 ee Gobolka Sh.Hoose. Goobjooge ayaa waxuu sheegay in Qaraxa uu ...
AKHRISO: Magacyada & Beelaha ay ka soo jeedaan Xildhibaanada dib loo dooranayo
Madasha wadatashiga Qaran oo saartay qoraal ayaa waxay ku shaacisay 11-kii kursi ee horay loo laalay in 4-ka mid ah dib loogu laabanayo,kuwaasi oo sida la sheegay ku soo baxay hab masuq maasuq. Hogaamiyaasha madasha ayaa sheegay in 7-ka mid ah kuraasta la fasaxay,waxaana cadeyn sababta ka danbeys arintaan. Shanta Xildhibaan ayaa Afar kamid ah waxaa ay ka mid yihiin ...
December 27, 2016	Leave a comment 22 Views
Maanta ayaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho lagu dhaariyo xildhibaannada Labada aqal ee baarlamaanka, iyadoo ammaankana aad loo adkeeyey. Xildhibaannada maanta la dhaarinayo waa 304 mudane, waxaana ku jira qaarkii la laalay iyadoo sidan ay u kala heleen xiildhibaannada maamullada dalka. Maamullada iyo Sida ay Xildhibaannada la doortey uga kala yimaadeen: Magaca Maamul Aqal Hoose Aqal Sare Wadarta Puntland 37 ...
DFS Oo Arrin Naxdin Badan Ka Sameysay Muqdisho, Shacabkii Oo..
December 27, 2016	Leave a comment 38 Views
Shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa saakay kusoo kacay iyadoo la xirey dhammaan waddooyinkii magaalada, balse waxaa arrintaasi oo dhan uga sii darnaatey cunoqabateyn nooc cusub ah oo magaalada lagu soo rogey. Waxaa la xirey dhammaan Jid cadayaasha waddooyinka Muqdisho, waxaana lagu jaray carro laga qodey halkaas, iyadoo bohollo aad u waaweyn laga sameeyey waddo walbo oo Muqdisho ah waliba ...
(ARAG SAWIRADA): Al-shabaab Generaal laga dhigay oo dad ku laayay deegaanka Xawaadley
December 27, 2016	Leave a comment 90 Views
Wararka saakay naga soo gaarayo Yuulada Towfiiq oo hoostaga deegaanka Xawaadley ee Gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in xaalad deganaasho ah laga dareemayo ka dib dagaalkii shalay halkaasi ku dhexmaray ciidamo ka wada tirsan Dowladda Somalia. Ciidamada wada dagaalamay ayaa waxaa hogaaminayo Labo sarkaal oo ka tirsan ciidamada Xooga,kuwaasi oo si micno-daro ah ku daadinaya dhiiga shacabka ah. Mid ka mid ...
DEG DEG: Hay’adda NISA oo soo bandhigtay Ninkii ka dambeeyay Qaraxii Dekada Muqdisho+SAWIRO
December 27, 2016	Leave a comment 34 Views
Hay’adda Nabad Sugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ayaa Caawa Xarunta Nabad Sugida waxey ku soo bandhigtay Ninkii ka dambeeyay Qaraxii culuss ee ka dhacay banaanka Dekada Magaalada Muqdisho. Qaraxaasi oo mas’uuliyadiisu ay sheegteen Ururka Al Shabaab ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 25 Ruux waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 60 kale. Taliska Nabad Sugida ayaa magaca Ninkii ka dambeeyay Weerarkaasi waxey ...
Waa kuma Dilaaga Qarsoon ee Magaalada Boosaaso Ee Gobolka Bari
December 26, 2016	Leave a comment 30 Views
Waa run in Boosaaso nabadgelyo u baahan tahay, su’aashuse waxay tahay dhinacee uga baahan tahay? Ma shacabkaa u baahan, ma Culimadaa u baahan, ma masuuliyiinta dowladaa u baahan, waa kuma qofka uu maanta amaankiisu sugan yahay? Waxaa xaqiiqo ah in masuuliyiinta si adag loo ilaaliyo goobaha dakhligu ka soo xerroodo, masuuliyiinta qaarkood iyo shakhsiyaad iyagu si madax banana u ...
Siyaasiyiin u hanjabay Dawladda Imaaraatka Carabta & Digniin loo diray
Siyaasiin iyo Wasiiro hore oo katirsanaa Somaliland ayaa uga digay dawladda Imaaraatka Carabta in ay faragalin ku sameyso arrimaha Siyaasada ee Maamulka Somaliland. Xubnahan oo shir ku qabtay ayaa sheegay in ay aad uga walaacsan yihiin wararka sheegaya in ay xukuumada Imaaraatku doonayso in ay saameyn ku yeelato doorashooyinka Somaliland ee fooda nagu soo haya. Sidaas oo ...
XAAD” Shacabka Muqdisho go’aan lama filaan ayay qaadan doonaan” + (Akhri)
December 26, 2016	Leave a comment 31 Views
Guddoomiyaha Odayaasha Dhaqanka iyo midnimada Beelaha Hawiye Nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo ka hadlay go’aankii madasha ay kuraasta dheeraadka ah ku siisay Maamul Goboleedyada dalka ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in Gobolka Banaadir lagu qadiyo. Wuxuu sheegay Nabadoonka in maqaamkii Muqdisho uu lumay,islamarkaana madaxda dalka ay iska dhega tireen baaqyadii kala duwan ee ka soo baxay Shacabka ...